Muxuu Farmaajo ka yiri geerida Dr. Xaawo Cabdi? | Keydmedia
Muxuu Farmaajo ka yiri geerida Dr. Xaawo Cabdi?
Drs Xaawo Cabdi waxay dhistay dhowr Isbitaal, kuwaasoo qeyb ka qaatey dib usoo nooleynta adeegga Caafimaad ee dalka, waxayna sidoo kale bare ka ahayd Jaamacadda Umadda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa uga tacsiyeeyey qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ay ka baxday Alle ha u naxariistee Marxuum Xaawo Cabdi Dhiblaawe oo ka mid ahayd hormuudka samefalayaasha Soomaaliyeed.
Farmaajo ayaa Marxuumadda Alle u weydiiyey in uu hoygeeda ka yeelo Jannatul Fardowsa, samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskeeda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee ay ka geeriyootay.
0 Comments Topics: farmaajo villa soomaaliya xaawo cabdi